June | 2012 | Rev.U Min Lwin | Page 2
ပြိုင်ပွဲဝင်သူတိုင်း အောင်ပွဲဆင်နိုင် ဘို့
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ျပိဳင္ပြဲ.	Leaveacomment
ထို့ကြောင့် ဤမျှလောက် များစွာသော သက်သေအပေါင်းတို့သည် ငါတို့ကို ၀န်းရံ လျှက်ရှိသည်ကြသည် ဖြစ်၍ ငါတို့သည် ခပ်သိမ်းသော ၀န်တို့ကိုလည်း ကောင်း နှောင့်ယှက်တတ်သော ဒုစရိုက်ကို လည်း ကောင်း ဖယ်ရှား၍ ငါတို့ မျက်မှောက်၌ ထားသော ပန်းတုံးတိုင်သို့ ရောက်ခြင်းငှါ အားမလျော့ဘဲ ပြေးကြ ကုန်အံ့။ (ဟေဗြဲ ၁၂း၁)
ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံပြီးသည်နှင့် သင်သည် မာရသွန်ပြေးပွဲ၌ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော ပြိုင်ပွဲဝင်တဦး ဖြစ်လာသည် (၁ကော ၉း၂၄ တွင်ကြည့်ပါ)။ တဦးနှင့်တဦး ပန်းတိုင်မတူညီကြပါ။ ထိုပန်း တိုင်ကို ဘုရားသခင်က တစ် ယောက်ခြင်းစီတိုင်အတွက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပြီးသား ဖြစ်သည်။ ထိုပြိုင်ပွဲ မ၀င်ခင်ကတည်းကပင် ပြိုင် ပွဲဝင်တိုင်းသည် ထာဝရ အသက် တည်းဟူသော လက်ဆောင်တခုစီ ရပြီး သား ဖြစ်သည်။ ယုံကြည် သူများသည် ထိုပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရာတွင် ကောင်းကင်၌ ရရှိမည့် ဆုလဒ်သရဖူ အ တွက် ပြိုင်ပွဲ ၀င်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲ မ၀င်ခင်ကပင် အကောင်းဆုံး လက်ဆောင် ရရှိပြီး ဖြစ်သည့် အတွက် အကယ်၍ အနိုင် မရခဲ့လျှင်လည်း အရှုံးဟူ၍ မသတ်မှတ်နိုင်ချေ။
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်၏ ပထမပိုင်းတွင် ဤမျှလောက်သော သက်သေအပေါင်းတို့သည် ငါတို့ကို ၀န်းရံလျက် ရှိသည်ဖြစ်၍ဆိုရာတွင် ထိုသက်သေ ဆိုသည်မှာ ဟေဗြဲ သြ၀ါဒစာ၏ အခန်းကြီး (၁၁)တွင် ဖော်ပြထား သော အကြောင်းအရာများကို ဆိုလိုပါသည်။ ထိုအခန်းကြီး (၁၁)တွင် ယုံကြည်ခြင်း၏ သူရဲကောင်းများ ဟုခေါ်သော ပုဂ္ဂ္ဂိုလ်များ၏ အကြောင်းကို ရေးသားထားသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် အ ကောင်းဆုံး အသက်ရှင်ခဲ့ပါသော်လည်း အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာပေါင်း မြောက်များစွာကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ သည်။ သို့သော် ထိုပြဿနာနှင့် အခက်အခဲများတွေ့ကြုံသော်လည်း ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ခြင်း၊ မျှော်လင့် ခြင်း၊ အားကိုးခြင်းတို့ ဖြင့် ကျော်လွှားခဲ့ကြပေသည်။ သူတို့သည် ပြိုင်ပွဲဝင်ရာတွင် ဘုရားသခင် သတ်မှတ် ထားသော ပန်းတိုင်သို့ ရောက်အောင် အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်သွားခဲ့ကြပြီး ဆုလဒ်သရဖူများ သည် သူတို့ကို စောင့်ကြိုလျက် ရှိပေသည်။
ယခု အားကစား ပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်သော အပြေးအားကစားကို လေ့လာကြည့်ပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက် အောင်မြင်မှုရရန် ထိုသူသည် လွတ်လပ်စွာ မပြေးဘဲ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး တခုကို ထမ်းပိုးပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ပါက ထိုပြိုင်ပွဲကို အဆုံးထိ ရောက်အောင် ပြေးနိုင်မည် မဟုတ်ဘဲ လမ်းတ၀က်တွင်သာ မောဟိုက် သွားပေ မည်။ အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်၌ခပ်သိမ်းသော ၀န်တို့ကိုလည်းကောင်း ဆိုရာတွင် ကျွန်တော်တို့သည် ပြိုင် ပွဲဝင်ရာတွင် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးများ ကို ဖယ်ရှားပစ်ဘို့ လိုပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အသက်တာတွင် ၀န်လေး ပင်ပန်း နေသော အရာမြောက်များစွာ ရှိပါသည်။ ထိုအရာများကို ယေရှုကိုယ်တိုင်က မဿဲ ၁၁း၂၈ တွင် ၀န်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါ့ထံသို့ လာကြလော့။ ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်။ ဟု ဖိတ်ခေါ် လျက်ရှိပေသည်။ ကျွန်တော်တို့ အသက်တာထဲက ၀န်တွေကို ခရစ်တော်က ပေါ့ပါးစေခြင်သည်။ ခရစ် ယာန်အသက်တာသည် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးများနှင့် လျှောက်လှမ်းရခြင်း မဟုတ်ပါ။ အလွန်ပေါ့ပါးခြင်းများဖြင့် လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါသည်။ အချို့သော ယုံကြည်သူများသည် မနက်ဖြန်နေ့အတွက် မစိုးရိမ်နှင့် ကိုယ်တော် ကမှာကြားထားသော်လည်း ထိုကတိတော်ကို မယုံကြည်နိုင်ဘဲ ပူပန်ခြင်း သောက ဝေဒနာတို့ဖြင့် လှမ်း လျှောက်နေကြရာ နေစဉ်အသက်တာအတွက် ၀မ်းမမြောက်နိုင်ကြဘဲ ရှိနေကြသည်။ နေ့စဉ်အသက်တာ အတွက် ပေါ့ပါးခြင်းများနှင့် အသက်ရှင်နိုင်ရန် သမ္မာကျမ်းစာထဲက ကတိတော်များကို ယုံကြည်ခြင်း အ ပြည့်အ၀ဖြင့် လျှောက်လှမ်းသင့်ပေသည်။
အထက်ပါ ကျမ်းချက်၏ ဒုတိယပိုင်သည် နှောက်ယှက်တတ်သော ဒုစရိုက်ကို လည်းကောင်း ဟု ရေးသား ထားပါသည်။ ပြိုင်ပွဲတွင် ရှင်းလင်းနေသော၊ အတားအဆီး မရှိသော ပြေးလမ်းပေါ်တွင် ပြေးရခြင်းက ပန်း တိုင်ကို ရောက်ဘို့ အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူ စေပါသည်။ သင့်၏မျက်စိထဲတွင် မြင်ကြည့်ပါ။ သင်သွားသော လမ်းခရီးတခုတွင် သစ်တုံးများ၊ ကျောက်တုံးများ၊ အခြားခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းများ၊ တာဆီးနေပါက သင်၏ခရီး မတွင်ကျယ်နိုင်ခြေ။ ပြိုင်ပွဲအတွက် ပို၍ပင် အတားအဆီး ကင်းဘို့လိုအပ်ပါသည်။ ၀ိညာဉ်ရေးတွင် အပြစ် တရားသည် အတားအဆီး တခုဖြစ်သည်။ နေစဉ်အသက်တာတွင် အပြစ်တရားကို မကျော်လွှားနိုင်ပါက ကျွန်တော်တို့ မျှော်မှန်းသည့် ဆုလဒ်သရဖူများနှင့် အလှမ်းဝေး သွားနိုင်ပါသည်။ မောရှည်သည် ဘုရားသ ခင်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရန် ကြီးမားသော နိမိလက္ခဏာကြီးများဖြင့် အသုံးတော်ခံခဲ့သည်။ သို့သော် လည်း အမျက်ဒေါသကို မထိန်းနိုင်သောကြောင့် ပန်းတိုင်ထိ မသွားနိုင်ခဲ့ချေ (တောလည်ရာ၂၀း၁၀-၁၂)။ ဒါဝိတ်ဘုရင်သည် ဘုရားသခင်ဘက်တွင် စိတ်အားကြီးသောသူဖြစ်သော်လည်း ဗာသရှေဘနှင့် ပြစ်မှား မိသော အပြစ်တရားကြောင့် အသက်တာထဲတွင် ၀မ်းနည်းစရာများ တွေ့ကြုံခဲ့ရသည် (ဓမ္မရာဇ၀င် ဒုတိ ယစောင် အခန်းကြီး ၁၁ မှ အခန်းကြီး ၂၀ အထိဖတ်ပါ)။ အပြစ်တရားကို အောင်နိုင်ရေးအတွက် နှုတ်ခ ပတ်တော်များများ ဖတ်ရှုဘို့ လေ့လာဘို့ ကျက်မှတ်ဘို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဆာလံဆရာက ကိုယ်တော်ကို မ ပြစ်မှားဘဲ နေနိုင်မည့်အကြောင်း ဗျာဒိတ်တော်ကို နှလုံးသားတွင် သိုထားပါပြီ ဟူ၍လည်းကောင်း နှုတ်ခ ပတ်တော်ကို ဖွင့်ပြခြင်းသည် အလင်းကို ပေး၍ မလိမ္မာသောသူကို လိမ္မာစေတတ်ပါ၏ဟူ၍လည်းကောင်း ရေးသားထားသည် ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် နေစဉ်အသက်တာထဲတွင် နှုတ်ခ ပတ်တော်များနှင့် လျှောက်လှမ်းဘို့ လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုပါသည်။
နောက်ဆုံ တစ်ချက်မှာ အားမလျော့ဘဲ ပြေကြကုန်အံ့ ဟူသောအပိုင်းဖြစ်သည်။ အသက်တာထဲတွင် ပြ ဿနာ အခက်အခဲများ တွေ့ကြုံရသော အခါ အားနည်းတတ်ကြသည်။ ဘာမှ မလုပ်ချင်၊ မကိုင်ချင်၊ မ သွားချင်၊ မလာချင်၊ မပြောချင် အစရှိသည်တို့ ဖြစ်လာတတ်သည်။ ထိုအခါ မျိုးတွင် အမှန်တကယ် အား ပေးမည့်သူမှာ ယေရှုခရစ်တော်သာဖြစ်သည်။ ငါ့ကို ခွန်အားနှင့် ပြည့်စုံစေတော်မူသော ယေရှုခရစ်တော် အားဖြင့် အရာခပ်သိမ်းကို ငါတတ်စွမ်းနိုင်၏(ဖိ ၄း၁၃)။ သင့်ဘ၀အသက်တာ၏ အားနည်းချက်များ တွေ့ ကြုံလာသည့်အခါ ယေရှုခရစ်တော်နှင့် အချိန်ယူပါ။
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုသော် အသက်တာ၏ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဘို့ရန်အတွက် ပထမအချက်ကတော့ နေ့စဉ် အသက်တာတွင် ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို အပ်နှံမည်။ ကိုယ်တော်၏ ကတိတော်များကို ယုံကြည်အားကိုးမည်။ ဒုတိယအချက်အဖြစ် နေစဉ်အသက်ရှင် မှုထဲတွင် အပြစ်တရား ၏ သွေးဆောင်မှုမှ လွတ်မြောက်စေရန် နှုတ်ခပတ်တော်များကို လေ့လာခြင်း၊ ဖတ်ရွတ်ခြင်း၊ ကျက်မှတ် ခြင်းတို့ ပြုလုပ်မည်။ မည့်သည့်အရာသည် အပြစ်၊ မည်သည့်အရာသည် အပြစ်မဟုတ် စသည်ဖြင့် ခွဲခြား သိရှိနိုင်ရန် နှုတ်ခပတ်တော်များကို များများလေ့လာ သင်ယူရမည်။ တတိယအချက်အဖြစ် ကျွန်တော်တို့ ကို အားအင်ချိနဲ့ စေသည် ၀မ်းနည်းခြင်း၊ စိတ်အားလျော့ခြင်းတို့ကို ကျော်လွားနိုင်ရန် ခရစ်တော်အာဖြင့် ခွန်အားယူမည်။ ညီအကို မောင်နှမများအားလုံး ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ကြပါစေ။
ကျေးဇူးတော်ကို ဖော်ပြသော ဟုတ်မုန်သော အလ င်း
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ေက်းဇူးေတာ္.	Leaveacomment
ပညတ်တရားကို မောရှည်လက်တွင် ပေးတော်မူ၏။ ကျေးဇူးတရားနှင့် သစ္စာတရားမူကား ယေရှုခရစ် အားဖြင့် ဖြစ်သတည်း။ (ယောဟန် ၁း၁၇)
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်က ကျွန်တော်၏ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်သည် ယခု ဂျော်ဒန်ဟုခေါ်သော နိုင်ငံရှိ နေဗော တောင် ပေါ်သို့ သွားယောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုတောင်ပေါ် တွင် ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ ကြည့်ရှုမြင်တွေ့ခဲ့သည် တို့ကို အားရပါးရ ပြောပြနေ ပါသည်။ သူပြောပြသော အကြောင်းအရာတို့ကို ကျွန်တော်၏ နှလုံးသားနှင့် အသွေး အသား မှနေ၍ မောရှည်၏ နေရာတွင် ခံစား ကြည့်မိပါသည်။ ထိုတောင်သည် မောရှည်မသေဆုံးခင်က ပေးတော် မူသော ကတိတော်မြေကို ထိုတောင်ပေါ်သို့ ခေါ်ယူ၍ ဘုရား သခင် ပြသခဲ့သော တောင်ဖြစ်ပါသည်။ (တရားဟော ၃၂း၄၈-၄၉) လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက သန့်ရှင်းသော မြေဖြစ်သော ခါနန်ပြည်ကို ကြည့်ရှုခဲ့သည့် မောရှည်သည် ထိုတောင်ပေါ်တွင် ရပ်ကာ လွန်စွာ စိတ်ထိခိုက်နေပေလိမ့်မည်။ သူ၏လူမျိုးကို ထို နေရာသို့ အရောက်ပို့ပြီး သူကိုယ် တိုင် ထိုနို့နှင့် ပျားရည်စီးသောပြည်တွင် ဘုရားသခင်နှင့် မွေ့လျော်မှုပြုရန် စိတ်ကူယဉ် ခဲ့ပေ လိမ့်မည်။ သို့သော် သူ၏ စိတ်ကူးအတိုင်း ဖြစ်မလာသောအခါ ထိုနေဗောတောင်ပေါ်မှ သူသေဆုံးမည့် နေ့ရက်မတိုင်ခင်အထိ စိတ်ခံစားမှု အပြည့်နှင့် မျက်ရည်များဖြင့် ထိုတိုင်းပြည် ကို ကြည့်ပြီး ကြေကွဲနေပေလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်၏ သူငယ်ချင်း မြင်တွေ့ခဲ့သော ခါနန်ပြည်သည် အလွန်လှပကြောင်း ပြောပြပါသည်။ ပင်လယ်သေနှင့် ယော်ဒန်မြစ်ကြီး သည် အစ္စရေးနိုင်ငံကို အမှန်တကယ် လှပတင့် တယ်စေသည်။ သူငယ်ချင်းက ဆက်လက်ပြော ပြသည်မှာ ကတိတော်နယ်မြေသို့ ၀င်စားခွင့်မရခဲ့သည့် မောရှည်အကြောင်းကို စဉ်းစားမိပြီး ထိုအဖြစ်အပျက်ကို တရားမျှတမှု မရှိဟု ခံစားမိကြောင်း ပြောပြပါသည်။ မောရှည်သည် အလွန်ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်သော လူတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အစ္စရေးလူမျိုးတို့၏ မဟာခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်ပါလျှက် အဘယ် ကြောင့် ၀င်စားခွင့် မပြုခဲ့ပါသနည်း။
ယခုအခါ ထိုတောင်ပေါ်တွင် ဆိုင်ဘုတ်ကလေးတစ်ခုသာ ရှိတော့သည်။ ထိုဆိုင်ဘုတ်ကလေးပေါ်တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားထားလေသည်။
ပညတ်တရား၏အောက်တွင် မောရှည်ကို ၀င်ခွင့်မပြုခဲ့သည်သာမက တန်ဘိုးကြီးမားလှသည့် ကျေးဇူးတရား၏ လက်ဆောင်များ ကို မမြင်နိုင်ရန်အတွက် ပညတ်တရား၏ တောင်း ဆိုမှုပေါင်း မြောက်များစွာဖြင့် ကွယ်ဝှက်ထား လိုက်လေသည်။ သို့သော် ဤ လောက၏ ဟုတ်မှန်သော အလင်း ရောက်လာသော အချိန်တွင် ကျေးဇူးတရားသည် ယေရှုခရစ်တော် အားဖြင့် ဖေါ်ထုပ် ဖွင့်ပြခြင်း ခံရလေသည်။
ယနေ့တွင် ဘုရားသခင် မေတ္တာတော်ကို ကောင်းသော ကိုယ်ကျင့်တရားဖြင့် တည်ဆောက်ရယူ ခံစားလိုသော ခရစ်ယာန်ပေါင်း မြောက်များစွာသည် ယနေ့တိုင်အောင် ရှိနေကြပါ သည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မောရှည်ထက် ပိုကောင်းသောသူများ ဖြစ်ကြပါ သလား။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ၀င်စားရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့သည် အမှန်တကယ် ကိုယ်ကျင့်တရားများကို မှီခိုအားထား နိုင်ပါသလား။ ခရစ်တော်၌ ရှိသော ကျေးဇူးတရားနှင့် သူ၏ မေတ္တာတရားများအတွက် ဘုရားသခင်သည် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သော သူဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတော်ကိုသာ လုံးဝ မှီခိုအားကိုးခြင်း နည်းလမ်းတမျိုးတည်သာလျှင် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်က ကျွန်တော်တို့ အသက်တာထဲတွင် လွတ်လပ်စွာ အလုပ်လုပ်ဆောင်လာပေမည်။
ကျေးဇူတော်သည် ကျွန်တော်တို့၏ အသက်တာကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ကျေးဇူးတော်သည် နုနယ်သော ယုံကြည်သူ များကို ဘုရားသခင်၏ အလင်းတော်ထဲတွင် တန်ခိုးနှင့် ပြည့်ဝသော အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်စေသည်။ တမန် တော် ရှင်ပေါလုသည် ဂလာတိ အသင်းတော်အတွက် ရေးသားထားသော စာထဲတွင် ကျေးဇူးတော်အကြောင်း အ တော် များများ ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုဂလာတိ သြ၀ါဒစာမှ ကျမ်းပိုဒ် အချို့ကို လေ့လာကြည့် ကြပါစို့။
ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူုးတော်အားဖြင့် ရွှေးချယ်ထားသည်။ (ဂလာတိ ၁း၁၅)။ ။ဤအကြောင်းအရာသည် အလွန်အင်မတန်မှပင် အံ့သြဘွယ်ရာဖြစ်သည်။ နေ့ရက်ကာလ မတိုင်မီ ကတည်းကပင် ကျွန်တော်တို့အတွက် အကြံအစည်တော် ရှိနေခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတော်နှင့် မေတ္တာ တော်ထဲတွင် ကျွန်တော်တို့ကို သန့်ရှင်းသောသူ၊ အပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောသူ များအဖြစ် သူနှင့်အတူ အသက်ရှင်ရန် ရွှေးချယ်ခွဲခန့်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာလောကကြီးနှင့် အရာ ခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းရာတွင် သူ့ကို ရင်းနှီးစွာ သိကျွမ်းရန်နှင့် သူ၏ နက်နဲသော မေတ္တာတရားကို နားလည်ရန်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မမွေးဖွားခင် ရှေးမဆွကပင် ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရ ပါသည်။ အချိန်တန်သော ကာလတွင် သူ၏နာမတော်ကို ကျွန်တော်တို့အား ဖွင့်ပြခဲ့ပြီး အသစ် ပြုပြင် သော အသက်တာကို ရရှိခံစားစေခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် သားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်နေကြသည်။ (ဂလာတိ ၂း၂၀)။ ။တမန်တော် ရှင်ပေါလုက ဂလာတိ ၂း၂၀ (ခ)တွင် ကိုယ်ခန္တာ၌ ယခုငါရှင်သော အသက်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် တည်၏။ သားတော်သည် ငါ့ကို ချစ်၍ ငါ့အဖို့ ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်တော်မူ၏ ဟူ၍ ရေးသားထားပါသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် လူအများ အတွက် အသေခံသည် ဟူ၍ မတွေးထင်စေလိုပါ။ ယေရှုကိုယ် တော်သည် သင့်ကို ကိုယ်တိုင်ချစ်၍ သင့်အဖို့ ကိုယ်တိုင် အသေခံ ခဲ့ပါသည်။ သူသည် လက်ဝါးကား တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံချိန်၌ သင့်တို့ အားလုံးကို သူသိရှိနေခဲ့ပါသည်။ သင်တို့ကိုယ်တိုင် အမည်နာမများ အားလုံးသည် သူ၏ အသက် စာစောင် စာရင်းတွင် ရေးသားထားလျှက်ရှိပါသည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသည် သင့်ကို ချစ်၍ ကောင်းကြီးများ သွန်းလောင်းချင်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ အမွေခံသားသမီး အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။ (ဂလာတိ ၃း၂၆)။ ။စဉ်းစားကြည့်မည်ဆိုပါက ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြွယ်ဝဆုးသောသူဖြစ်သော ဘီလ်ဂိတ်၏ အမွေခံ သားသမီး ဖြစ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သင်သည် သူ၏ ဆွေမျိုးသားချင်း မဟုတ် သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ကို သူ၏ ကျေးဇူးတော် အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ အဖြစ် ဂတိပြုခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့၏ နှလုံးသားထဲက ဘုရားသခင်၏ ၀ိညာဉ် (ဂလာတိ ၄း၆)။ ။အလွန်တရာ ထူးခြားအံ့သြဘွယ် ကောင်းသော အရာတခုမှာ ဘုရားသခင်၏ ၀ိညာဉ်တော်ကို ကျွန်တော်တို့၏ နှလုံးသားထဲသို့ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးတိုင်း သည် ခရစ်တော်၏ ၀ိညာဉ်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်။ သံသယ မဖြစ်ပါနှင့်။ ဘုရားသခင်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် ယေဇကျေလ ၃၆း၂၆ အားဖြင့် ကတိပြုထားပြီး ဖြစ်သည်။ သင့်ကို နှလုံး သားအသစ်ပေးမည်။ ငါ့ဝိညာဉ်ကိုလည်း သင်တို့အထဲတွင် ထည့်ပေးမည်။ ၀ိညာဉ်ဆိုသည်မှာ ၀ယ်ယူ၍ မရနိုင်ပါ။ ဤအရာမှာ ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ရရှိသော ဘုရားသခင်ထံတော်မှ အခမဲ့ လက်ဆောင်ဖြစ်သည်။
၀ိညာဉ်ပကတိဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်း (ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၃) ကျွန်တော်တို့၏ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် စွမ်းရည်များ (သို့) ရာထူး၊ ဂုဏ်ထူးများ (သို့) ညဏ်ပညာများ အလုံးစုံတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တွင် မည်သို့မျှ အရေးမကြီးပါ။ မေးခွန်းတခုမှာ ဘုရားသခင်၏ ၀ိညာဉ်တော်ကို ကျွန်တော်တို့ အထဲတွင် အသက်ရှင်ရန် မည်မျှလောက်ခွင့်ပြုရမည်နည်း။ အားနည်းခြင်းကို စုံလင်ခြင်းသို့ တန်ခိုးတော်နှင့် ပြုပြင်ပြီးနောက် ကျေးဇူးတရား၏ အတောက်ပဆုံး ထွန်းလင်မှုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ဤလောကမှ အားနည်းသူများကို ထူးထူးခြားခြား ရွှေးချယ်တော်မူခဲ့သည်။
ကောင်းသောအမှုကို ပြုကြပါစို့ (ဂလာတိ ၆း၁၀)။ ။ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်သည် အလွန်ပင် လက်တွေ့ကျလှပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူများကို ဂရုတစိုက် ကြည့်ရှုလျှက်ရှိပြီး ကျွန်တော်တို့ကို လည်း အချင်းချင်း တစ်ဦးကို တစ်ဦး ကျေးဇူးပြုရန် အသုံးပြုချင်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ကောင်းသောအမှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ရန် အတွက် ဘုရားသခင်က ပြုပြင်ဖန်ဆင်းထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေကို တိုက်တွန်းနိုးဆော်မှုပြုလိုသည်မှာ အထက်ပါ အချက်များကို ရရှိခံစားထားပြီးသူ ဖြစ်ပါက အခြားသူများကို လည်း ပြန်လည် ဝေငှ တိုက်တွန်ပေးရန်နှင့် မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်လည်း ကျေးဇူးတော်ထဲမှာ ၀မ်းမြောက်ခြင်းနှင့် ဆက်လက် အသက်ရှင်မှု ပြုရန် တိုက်တွန်း နိုးဆော်လိုက်ပေသည်။
ကျွန်တော် ဒါဝိတ်ဘုရင်ကို ကြိုက်နှစ်သက် ရခြင်း အကြောင်း
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ဒါဝိတ္.	Leaveacomment
ကျွန်တော့်ကို ကျမ်းစာထဲတွင် အကြိုက်ဆုံး လူတစ်ယောက်ကို ပြောပြပါဆိုလျှင် ရှင်ဘုရင် ဒါဝိတ်ကိုသာ ညွှန်ပြမည်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူ ဟူ၍ ဓမ္မရာဇ၀င် ပထမစောင် ၁၃း၁၃-၁၅တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ သို့သော်သူသည် စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ အပြစ်များကို ကျူးလွန်ဘူးသူ တော့ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကို လူများက ဗာသရှေဗ ဆိုသော အိမ်ထောင်ရှင် မိန်မချောလေးတစ်ဦးနှင့် ပြစ်မှား ဘူးသူ ဟူ၍ လူသိများကြပါသည်။
ထိုအပြစ်ကို ဖုံးဖိရန် ကြိုးစားအားထုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် အခြားအပြစ်ကို ထပ်မံ ကျူလွန်မိပြန်သည်။ ထို အပြစ်မှာ မိန်မချောလေး ဗာသရှေဗ၏ လင်ယောင်္ကျား ဥရိယ ကို သတ်ပစ်မိသော လူသတ်မှု အပြစ်ပေ တည်း။ (ဓမ္မရာဇ၀င် ဒုတိယစောင် ၁၁း၁-၂၇ ကိုကြည့်ပါ။)
သူ့မယားကိုပြစ်မှားသူ၊ လူအသက်ကို သတ်သူ ဖြစ်ပါလျှက် အဘယ်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူဟူ၍ ပြောနိုင်ပါသနည်း။ ကျွန်တော် ယုံကြည်မိတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ သူရဲ့ ကျဆင်းမှု ကို နောင်တတရား ရရှိခဲ့ပြီးစိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ ဘုရားသခင်ထံ ပြန်လည်တိုးဝင်ချည်းကပ်ခဲ့သည်(ဆာလံ ၅၁ ကိုဖတ်ပါ။) သူ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်စီးမှုကို အကြီးအကျယ် နောင်တရ ၀မ်းနည်းခဲ့သော အချက် သည် ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့စေသောသူ ဖြစ်သည် ဟူသောအချက်ကို ကျွန်တော် ခံစားမြတ် နိုး မိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းပြီး၊ ထိုဘုရားကို မြတ်နိုးကိုးကွယ် နေလင့် ကစား ခရစ်ယာန် အသက်တာ လျှောက်လှမ်းမှုတွင် အားနည်း ကျဆင်းနေမှုကြောင့် အထက်ပါ ဒါဝိတ် အ ခြေအနေကို တွေ့မြင့်ရသောအခါ သတင်းကောင်းတခုအဖြစ် ခံစားဝမ်းမြောက်ရပါသည်။
ယနေ့ခေတ် ခရစ်ယာန်များအတွက် ရှင်ဘုရင် ဒါဝိတ်ထံမှ သင်ယူစရာပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိပါသည်။ ကျွန်တော် သည်ဒါဝိတ်ဘုရင်အကြောင်း အတွဲလိုက် ၀ိညာဉ်ရေးရာ ဆောင်းပါများ ရေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိ သောကြောင့် ဒါဝိတ်အကြောင်း အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်သောအခါ သိုးထိန်း အဖြစ်သော်လည် ကောင်း၊ သီချင်းဆိုသူ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ စစ်သူရဲ တစ်ယောက်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံအကြီးအကဲ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပညာရှိတစ်ဦး အဖြစ်လည်ကောင်း… စသည့် စသည့် စရိုက်လက္ခဏာပေါင်း မြောက် များ စွာ သူထံတွင် ရှိနေကြောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။
အဘယ်ကြောင့် ဒါဝိတ်ရှင်ဘုရင်အကြောင်းကို အကျယ်တ၀င့် လေ့လာလိုပါသနည်း။ အကြောင်းအရာ ပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိပါသည်။ ပထမအချက်မှာ ဒါဝိတ်ကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့ ခရစ်ယာန်အသက်တာ မလျှောက်လှမ်းနိုင်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူ ဖြစ်ချင်သော ကြောင့်ဖြစ် သည်။ သူ့ထံတွင် ၀မ်းနည်းစရာ ကျဆင်းမှု စရိုက် လက္ခဏာများ ရှိနေသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ စိတ် တော်နှင့် တွေ့သောသူ ဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် သင်ယူချင်သော အရာများရှိနေသည်။ သူ့အ ကြောင်းကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ ၀ိညာဉ်ရေးရာအတွက် အဖြေများ ရှိနေမည် ဆိုသည့် အ ချက်ကို ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ထားသည်။
ဒါဝိတ်ရှင်ဘုရင် အကြောင်းလေ့လာရန် အခြား အကြောင်းအရာများစွာလည်း ရှိနေပါသေးသည်။ သူ၏ ဘ၀အစပိုင်းတွင် နှိမ့်ချမှု အပြည့်ရှိသော လူငယ်လေးတစ်ဦး အဖြစ်လည်း တွေ့မြင်နိုင်ပါသေးသည်။ သူ၏ မိသားစုထဲမှာပင် သူကဲ့သို့သောသူကို တွေ့နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ ထိုအချက်ကပင် ဒါဝိတ်အကြောင်းကို ဖော်ပြသော ကျမ်းစာထဲတွင် ကျမ်းပိုဒ်များအားလုံးမှ အချက်အလက်ပေါင်းမြောက်များစွာက ဒါဝိတ်၏ နှိမ့်ချမှု ကို ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ကျမ်းပိုဒ်ပေါင်း တစ်ထောင်ခန့်က ဒါဝိတ်အကြောင်းကို ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ကျမ်း စာထဲမှ အခြားနာမည်ကျော် ပုဂွှိုလ်များဖြစ်သော အာဗြဟံ၊မောရှည်တို့ထက်ပင် ပိုမိုများပြားသော ကျမ်း ပိုဒ်များဖြင့် ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ထိုမျှလောက် များပြားသော ကျမ်းပိုဒ်များဖြင့်ဒါဝိတ်အကြောင်းကို နှိုက်နှိုက် ချွတ်ချွတ် ဖေါ်ပြနေခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့ကို သွန်သင်ပြောပြ လိုသောအရာများ ရှိမည်မှာ လက်ခတ် မလွှဲ ရှိမည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်မိပါသည်။ သူ့အကြောင်း လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော် တို့၏ အ သက်ရှင်မှုနေ့ရက်များကို ပျော်ရွင်စရာ ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
ဘုရင်ဒါဝိတ်သည် ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်၏ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တော်အဖြစ် ရှိနေသည်မှာ လည်း ထူးခြားမှု တခုပင်ဖြစ်သည်ဟု ခံစားမိပါသည်။ ကယ်တင်ရှင် ခရစ်တော်ကို ရည်ညွှန်းလိုက်သည့်အခါတိုင်း ဒါဝိတ်၏ သားတော် ဟူ၍ သုံးနှုံး ခေါ်ဝေါ်ထားသည်ကို လည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူ့ကို ယုံကြည်ခြင်း အ ကြောင်း များ ကို ဖေါ်ပြသော လူသိများ ထင်ရှားသည့် ဟေဗြဲကျမ်း အခန်းကြီး ၁၁ တွင် ယုံကြည်၏ သူရဲကောင်း အ ဖြစ်လည်း ဖေါ်ပြထားသေးသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ ပုဂွှိုလ်အကြားတွင် ဒါဝိတ်ကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် အကြိုက်ဆုံးပုဂွှိုလ်ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုရခြင်းမှာ အထက်ပါ အကြောင်းအရင်း များကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သင် ကိုယ်တိုင်လည်း ဒါဝိတ်ရှင်ဘုရင်အကြောင်းကို ပိုမို အသေးစိတ်လေ့လာခြင်းအားဖြင့် သင့်၏ ၀ိညာဉ် ရေးကိုလည်း တစုံတရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်ဟု ခံစား မျှော်လင့်ကာ တိုက်တွန်း အားပေးလိုက်ပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း အခါအားလျှော်စွာ ဒါဝိတ်၏ အသက်တာထဲမှ ထူးခြားသော အ ကြောင်းအရာများကို ဆက်လက် ရေးသားပါဦးမည်။
ရှေးမဆွက ရွေးနှုတ်ခွဲခန့်ခြင်း (အပိုင်း- ၂)
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ခြဲခန္႔, ေရြးႏႈတ္.	Leaveacomment
အဘယ်ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ဧသောကို မုန်းရပါသနည်း။ လူတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ကို အဘယ်ကြောင့် အကြောင်းမဲ့သက်သက် ခံစားခဲ့ရပါသနည်း။ အမှန်တကယ်ဆိုရသော် ဧသော တစ်ဦးတည်းသာ မဟုတ်။ လူသားများ အားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ အမုန်းဒဏ်ခံသင့်သူ များဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးဂရုဏာတော်နှင့် အလွန်ကြွယ်ဝတော်မူသော ဘုရားသခင်သည် လူတစ်စုံတစ် ယောက် (သို့)လူသားများကို အကြောင်းမဲ့သက် သက် မုန်းတီးမည် မဟုတ်ချေ။ ဘုရားသခင်သည် ပြစ်ဒဏ်ခံသင့်သည်ထက်ပိုပြီး လူတစ်ဦးကို အပြစ်ပေမည် မဟုတ်ချေ။ ငရဲသို့ ရောက်သောသူတိုင်းသည် ရောက်သင့်သော အကြောင်းပြချက် လုံလုံလောက်လောက်ရှိ သည်။ ဘုရားသခင် သည် လူသားများကို တရားစီရင်ရာတွင် မုန်ကန်စွာ တရားစီရင် တတ်ပါသည်။
ဧသောသည် မည်ကဲ့သို့သော လူစားမျိုးဖြစ်ပါသနည်း။ ဧသောကို မုန်းသင့်သော ပြစ်ချက်များ ရှိနေပါသည်။ တစ်နေ့ တွင် အမဲလိုက်ရာမှ ပြန်လာသော ဧသောသည် အလွန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်သဖြင့် ညီဖြစ်သူထံ စားစ ရာ တစ်စုံတစ်ခုကို မေးမြန်းရာ ယာကုတ်က ဟင်းတစ်ခွက်နှင့် သားဦးအရာကို အလဲအလှယ်ပြုရန် အပေးအယူ စကားဖြင့် တောင်းဆိုလာသည်။ ဧသောသည် အလွယ်တကူပင် လိုက်လျောမိခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်တွင် သားဦးအရာကို ရရှိခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ကြီးမားသော မေတ္တာတော်ကြောင့်သာ ဖြစ်သည် ဆိုသည်ကို ဧသော သိကောင်းသိနိုင်သည်။ ဟေဗြဲအမျိုးသား တိုင်းသည် သားဦးများသည် သားဦးဖြစ်ရခြင်းကို ဂုဏ်ယူ ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် သားဦးများကို တန်ဘိုးထားသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင် တန်ဘိုးထားသော အရာကို ဟင်းတစ်ခွက်စာ တန်ဘိုးဖြင့် အပေါစား ပစ္စည်းတစ်ခု သဖွယ်ရောင်းချ ခဲ့သည်။ အာဒံနှင့် ဧ၀သည် ဘုရားသခင်နှင့် ရှိသော မိတ်ဿဟာရကို အစားအစာဖြစ်သော အသီးတစ်လုံးဖြင့် တန်ဘိုး ဖြတ်ခဲ့သည်။ ဧသောသည် ဘုရားသခင်တန်ဘိုးထားသော သားဦးအရာကို မထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ရန် မည်သူကမျှ အတင်းအကျပ် ပြုခဲ့ခြင်း မရှိချေ။ သူကိုယ်တိုင် သူသဘောနှင့်သူ လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သားဦးအရာကို ယာကုတ်ရရှိရန် အလိုတော်ရှိသည်ဘဲထားစေဦးတော့။ ဧသောကို မည်သို့မျှ ဖိအားပေး အကျပ်ကိုင်ခဲ့သည်တော့ မဟုတ်ချေ။ ဘုရားသခင်သည် မည်သူကိုမျှ အပြစ်တရားလမ်းသို့ သွေးဆောင်ခြင်း မပြုပေ။ သားဦးအရာနှင့် လွဲခဲ့ရသောဧသောကဲ့သို့ပင် ထာဝရအသက်နှင့် လွဲခဲ့ရသော သူများကိုလည်း ဘုရားသခင်က သွေးဆောင်ခြင်း အတင်းအကျပ်ပြုမူခြင်းတို့ မလုပ်ခဲ့ပါ။ ကိုယ့်သဘောနှင့် ကိုယ် ယုံကြည်ခြင်း တရားလမ်းကို စွန့်ခွာကာ မိမိသဘောအလျောက် စိတ်တိုင်းကျ ပြုမူခဲ့ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။
လူသားတိုင်းအား ထာဝရအသက် ခံစားရန် ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိပါသည်။ သို့သော် လူသားများ ဘက်က ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို ကျောခိုင်းကာ လောကီ ကာမဂုဏ်တွင် နစ်မောနေကြပါသည်။ လူတို့သည် အပြစ်ဒုစရိုက်တွင် ကျေးကျွန်သဖွယ်ဖြစ်နေသည်။ ရုန်းထွက်ရန် မတတ်စွမ်းနိုင်ကြချေ။ သို့သော် ဘုရားသခင် အပေါ် အပြစ်ပုံချစရာမရှိချေ။
သားဦးအရာကို အမှန်တစ်ကယ် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ကို သိရှိလာပြီးနောက် သားဦးအရာကို မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကြလျက် ၀မ်းနည်းပက်လက်ဖြင့် ဖခင်၏ ရှေ့မှောက်တွင် ပြန်လည်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် အချည်းအနှီးသာပင်။ ဖခင်ကိုယ်တိုင်က ကောင်းကြီး ပြန်လည်ပေးလိုသော်လည်း ဧသောသည် သားဦးအရာကို ရောင်းစားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ကို ဘုရားသခင်နေ့ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတွင် ၀င်ရောက်သွားပေပြီ။ ထိုကဲ့သို့ပင် ကျွန်တော်တို့၏ နေ့စဉ်ဆောင်ရွက် ပြောဆိုမှုများကို ဘုရားသခင်က မှတ်တမ်းတင်နေသည်။ ကောင်းကင်ဘုံနှင့် ဝေးခဲ့ရသောသူတိုင်းသည် ဧသောကဲ့သို့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲခြင်း နောင်တရခြင်းတို့၊ မိမိတို့၏ အကျင့်စာရိတ္တများကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းတို့ဖြင့် ကောင်းကင် သုခဘုံကို ပြန်လည်ရနိုင် လိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်နေကြသည်။ ဧသောသည် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ပြန်လည် ကြိုးစားအားထုပ်သည် ဖြစ်စေ သားဦးအရာကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ အပြစ်သားများဖြစ်သော လောကသားတိုင်း သည် ဒုစရိုက်များကို စွန့်လွတ်ရုံဖြင့် ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပြန်လည်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ဘုရားသခင် ပေးတော်မူသော ကျေးဇူးတော်ကို လက်ခံမှသာ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ၀င်စားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဧသောသည် နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင့် နောင်တရခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူဆုံးရှုံးခဲ့သော သားဦးအရာအတွက် ညီဖြစ်သူကို လက်စားချေ သတ်ဖြတ်မည်ဟု ကြုံးဝါး ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ သတ်ဖြတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် သားဦးအရာကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်ဟု တွေးတောကြံဆ သလားဆိုသည်ကိုတော့ မသိပါ။ ထိုအရာ သည် နောင်တမဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သော နောင်တသည် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော် တန်ခိုးအားဖြင့် မဟုတ်ပါ။ မိမိ၏ ဇာတိအလိုအားဖြင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။
လူအများစုသည် ဧသောကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ နောင်တရပါသည်ဟု ပြောဆိုနေကြသော်လည်း အမှန် တကယ်တွင် အပြစ်ပြုမိသောကြောင့် စိတ်ညစ်စွာဖြင့် ပြန်လည်တုန့်ပြန် ပြောဆိုကြခြင်း သာဖြစ်ပါ သည်။ ပါစပ်ဖြင့် နောင်တရ ခြင်းသည် အပြစ်နွံထဲက ရုန်းမထွက်နိုင်သည်သာမက ပိုမို၍ပင် နစ်မွန်းစေပါသည်။
မိမိအမျက်တော်ကို၎င်း၊ တန်ခိုးတော်ကို ပြသခြင်းငှါ အလိုရှိသော ဘုရားသခင်သည် ပျက်စီခြင်းသို့ ရောက်ရန် ပြင်ဆင်ထားသော အမျက်ခံရာ အိုးများအပေါ် ကြီးစွာသော ခန္တီနှင့် သီးခံတော်မူလျှင် အဘယ်ပြောဘွယ် ရှိအံ့ နည်း။ ဘုန်းတော်အတွက် ပြင်ဆင်ထားနှင့်သော ဂရုဏာခံရာ အိုးများအပေါ် ၌ ဘုန်းအာနုဘော်တော် ကြွယ်ဝ ခြင်းကို ထင်ရှားစေခြင်းငှါ ပြုတော်မူသည် မှန်လျှင် အဘယ်ပြော ဘွယ်ရှိအံ့နည်း။ (ရောမ ၉း၂၂-၂၃)
ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားချက်အရ လူသားများအတွက် ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းကို ဘုရားသခင်က လုံးဝ မလုပ်ပါ။ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်သာဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကမူ လူသားများကို ကယ်တင် ခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် တင်ပေးခဲ့သည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက် ကယ်တင်ခြင်း ရခဲ့ပါမူ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းအသရေကို ဖော်ပြ၍ လူသားများ ဂုဏ်အသရေမဲ့ခြင်းနှင့် ဆုံးရှုံးခြင်း ဖြစ်ခဲ့ပါမူ ကာယကံရှင် လူသားများနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။
နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌ လူသားများအားလုံးသည် စီရင်ခြင်းခံရရန် ခရစ်တော်ရှေ့မှောက်တွင် တွင် ရပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ လက်ယာဘက်တွင် နေရာရသောသူတို့ကို ခရစ်တော်က
“ငါ့ခမည်းတော်ထံမှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံယူသောသူတို့ သင်တို့အဘို့ ပြင်ဆင်သော အမွေကို လာရောက်အမွေခံကြလော့”ဟု မိန့်တော်မူ၏။” (မဿဲ ၂၅း၃၄)
“ကျိန်ခြင်းခံရသောသူတို့ မာန်နတ်နှင့်သူ၏ တမန်များအဘို့ ပြင်ဆင်သော ထာဝရ မီးထဲသို့ ငါ့ထံမှ ခွာသွားကြလော့” ဟုမိန့်တော်မူ၏။ (မဿဲ ၂၅း၄၁)
အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်တွင် “ငါ့ခမည်တော်၏ ကျိန်ခြင်းခံရသောသူတို့” (သို့) “သင်တို့အဘို့ ပြင်ဆင်သော ထာဝမီး” အစရှိသော စကားလုံးများကို အသုံးမပြုပါ။ ငါ့ခမည်းတော်ထံမှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံရသောသူတို့ စကားလုံးများ ထဲတွင် ရွေးကောက်ခြင်းတရားကို တွေ့ရပါသည်။ အဖိုးအခ မပေးရသော ကျေးဇူးတော်ကို လည်း အတိုင်းအဆ ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာ မြင်ရပါသည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့် အထက်ပါ လေ့လာချက်ကို နှစ်ပိုင်းခွဲခြားပြီး တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ပထမပိုင်း အနေ ဖြင့် ယာကုတ်ကို အဘယ်ကြောင့် ချစ်ရပါသနည်း ဟူသော လေ့လာချက်ကို လည်းကောင်း၊ ဒုတိယ အဖြင့် ဧသောကို အဘယ်ကြောင့် မုန်းရပါသနည်း ဟူသော အချက်ကို လည်းကောင်း တင်ပြခဲ့ပါ သည်။ နိဂုံချုပ်အားဖြင့် တင်ပြလိုသည်မှာ ယာကုတ်သည် ဘုရားသခင်က မည်သည့် အရာကို တန် ဘိုးထားသည်ကို နားလည်ပြီး ထိုအရာကို မက်မောစွာ အရယူခဲ့ပေးသည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင်လည်း မိမိ၏ ဇာတိဖြင့် ကြိုးစားအားထုပ်မှုများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အချည်းအနှီးဖြစ်ကြောင်း နားလည် သဘော ပေါက်လာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် စစ်မှန်သော နောင်တတရားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့ တော်တွင် ကောင်းစွာ အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဧသောဟူမူကား ဘုရားသခင်တန်ဘိုးထား သော အရာကို တန်ဘိုးမထားခဲ့သည်သာမက ထိုအရာသည် ကြီးစွာသော ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ကြောင်းသိရှိ လာသောအခါတွင် လည်း စစ်မှန်သော နောင်တတရားမရခဲ့။ လက်စားချေ တုန့်ပြန်လိုသော သဘော နှင့် ဇာတိကိုသာ ဦးစားပေးခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ခံရာလမ်းကို မည်သူ တစ်စုံတစ်ယောက်ကမျှ တိုက်တွန်းအားပေးမှု မပါဘဲနှင့် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် လျောက်လှမ်းခဲ့သည်။
ထိုနည်းတူ အပြစ်သား တစ်စုံတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးခြင်းလမ်းသို့ ရောက်ခဲ့ပါက မိမိတို့၏ တာဝန်သာ ဖြစ်ပြီး ထိုလမ်းကို ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်မြတ်နိုးသော အရာသည် သူ၏အကြံ အစည်တော်လမ်းကို တန်ဘိုးထားစေချင်သည်။ သူ၏ အကြံအစည်တော်ဖြစ်သော ခရစ်တော်အားဖြင့် ခံ စားရမည့် ကျေးဇူးတော်ကို လူသားတိုင်းကို ရယူခံစားစေလိုသည်။ သို့သော် သူ၏ အကြံအစည်တော်ကို ပစ်ပယ်ကာ ခရစ်တော်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းသည် ဧသောမှ သားဦးအရာကို ငြင်းပယ်လိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပါ သည်။
မေတ္တာခံစားရသော ယာကုတ်သည်လည်း သူ၏ကျင့်ကြံအားထုပ်မှုကြောင့် မဟုတ်ပါဟူ၍ ထပ်မံနားလည် ရပါသည်။ အဓိကအချက်ကတော့ ဘုရားသခင်က မည်သည့်အရာကို တန်ဘိုးထားသည်ကို နားလည်ပြီး အသက်တာတွင် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အရယူနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ယာကုတ်သည် အမှန်တကယ် သားဦး မဟုတ်သော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သားဦးအရာကို အရယူခဲ့သလို ဘုရားသခင် တန်ဘိုးထား သည့် ကျွန်တော်တို့၏ အသက်ဝိညာဉ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရာသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို ရယူခံစားကာ သူ၏ မေတ္တာ၌ အသက်ရှင်ကြပါစို့။
သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ (တမန် ၁၆း၃)
ယာကုတ်နှင့် ဧသော ညီအကို အကြောင်း
ယာကုတ်ကို ငါချစ်၏။ ဧသောကို ငါမုန်း၏။ (ရောမ ၉း၁၃)
ဘုရားသခင်၏ ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သောအကြောင်းအရာကို ရှင်းပြရန် အလွန်ခက်ခဲသည် ဟု ထင်မြင်ပါ သည်။ ဘုရား သခင်သည် လူတစ်ချို့အား သူ၏လူမျိုးတော်အဖြစ် ကြိုတင်ခွဲခန့်ခဲ့သည် ဆိုသည်မှာ အလွန်နားလည် ရ ခက်သည့် ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ် ပင်ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သော အကြောင်း အရာများကို ဆွေးနွေးငြင်းခုံ လာသည်မှာ အသင်း တော်ခေတ်ဦးမှ စ၍ ယနေ့တိုင်အောင်ပင်ဖြစ်သည်။ အချို့ သော အမှုတော်ဆောင်များက သိ နား လည်သလောက် အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်နိုင်ရန် ရှင်းပြနေကြ သော် လည်း အမှန် တကယ် နားလည်နိုင်သော အမှုအရာ မဟုတ် ချေ။
ယခု ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သတ်သော နှုတ်ခပတ်တော်ကို ဆွေးနွေးလိုပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဆွေးနွေး ရာတွင် သန့် ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်၏ လမ်းပြမှု အမှန်တကယ်လိုအပ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအကြောင်း အရာကို နားလည်နိုင် ရန် ပထမဦးစွာ ဆု တောင်းမှုပြုပါ။
ဘုရားသခင်သည် လူအချို့အား ကယ်တင်ခြင်းရရန် ရွေးကောက်၍ အချို့ကို အပြစ်အတွက် စီရင်ခြင်း ခံရရန် ချန် လှပ် ထားသည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သတ်၍ သမ္မာကျမ်းစာပါ အကြောင်းအရာများထဲမှ တစ်ခုကို လေ့လာ လိုပါသည်။ ထိုကျမ်းချက်မှာ “ယာကုတ်ကို ငါချစ်၏။ ဧသောကို ငါမုန်း၏” (ရောမ ၉း၁၃) ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကျမ်း ပိုဒ် သည် အလွန်ထိတ်လန့်စရာကောင်းသည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။ လူများက အမုန်းဆိုသော စကား လုံးကို မကြားလို သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် “မုန်းသည်” ဟူသောစကားလုံးကို အတိအလင်း သုံးစွဲထား ပါသည်။ ထိုအကြောင်း အရာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သူတို့နှစ်ဦးကို လေ့လာကြည့်သောအခါ အောက်ပါ ဇယား အတိုင်းမြင်ရမည် ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ ဇယားတွင် ဖေါ်ပြထားသော အကြောင်းအရာများကြောင့် ဧသောသည် အမှန်တကယ် အမုန်းခံခဲ့ရသည်မှာ သေချာပါသည်။
“ဘုရားသခင်ရွှေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့် ယှဉ်သော အကြံတော်သည် အကျင့်အားဖြင့် မတည်။ ခေါ် တော်မူသောသူ၏ အလိုတော်အားဖြင့် တည်မည့်အကြောင်း မဖွားမည် (သို့) ကောင်းသော အကျင့်၊ မကောင်း သောအကျင့် မကျင့်မည် သားကြီးသည် သားငယ်ထံ၌ ကျွန်ခံရမည်” (ရောမ ၉း၁၁-၁၂)
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်သည် ဧသောနှင့် ယာကုတ်ကို တိုက်ရိုက် ရည်ညွှန်ထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် ယာကုတ်ကို အဘယ်ကြောင့် ချစ်ပြီး ဧသောကို အဘယ်ကြောင့် မုန်းရပါသနည်း။
ဘုရားသခင်သည် လူအချို့ကိုသာ ရွှေးကောက်၍ အခြားသူများကို ရွှေးကောက်ခြင်းမပြု။ ဘုရားသခင် သည် လူသားများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမတူကွဲပြားခြားစွာဖြင့် ကိုင်တွယ်နေကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ၀န်ခံရပေမည်။ အရာရာတိုင်းတွင် တစ်ဦးနှင့်တဦး အခွင့် အရေးများလည်းမတူ။ အချေ အနေလည်း မတူစေရန် ဘုရားသခင် ပြုလုပ်ထားသည်။ လူချမ်သာနှင့် လူဆင်းရဲ၊ ပညာတတ်သူနှင့် မတတ်သူ၊ နှုတ်ခတ်တော် ကြားနှိုင်သူနှင့် ကြားခွင့်မရသူ၊ သွန်သင်ပေးနိုင်သော ဆရာသမားများ ရှိသူနှင့်မရှိသူ စသည်ဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး များစွာ ခြားနား ချက်တွေ ရှိနေကြသည်။ ထိုအရာများ အားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ စီမံခန့်ခွဲမှုများ အောက်တွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်နေကြသလား။
လူနှစ်ယောက်သည် တစ်ချိန်တည်း၊ တစ်နေရာတည်း၊ ဆရာတစ်ဦးဧ၀ံဂေလိ သတင်းကောင်းကို ကြားနာခဲ့ရပြီး တစ်ဦးကတော့ စိတ်နှလုံး စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်လက်ခံက နောက်တစ်ဦးကတော့ လုံးလုံး ပစ်ပယ်ပြီး ကျောခိုင်းလိုက်သည်။ ဘုရားသခင်သည် တစ်ယောက်အပေါ်တွင် ကြီးသော လက်တော်နှင့် တို့ထိက နောက် တစ်ဦးအပေါ်တွင် တို့ထိခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ နှစ်ဦးကို ခြားနားစွာ ကိုင်တွယ် ခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံရပေမည်။
ယာကုတ်ကို အဘယ်ကြောင့် ချစ်ရပါသနည်း။ အမှန်တကယ်တွင် ယာကုတ်သည် ကောင်းသောသူ တစ်ယောက် မဟုတ်ချေ။ ဟေဗြဲဘာသာစကားအားဖြင့် ယာကုတ်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှာ “လိမ်လည် လှည့်ဖြားသူ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ အမည်နှင့် လိုက်အောင်ပင် ညဏ်အလွန်များပြီး လှည့်ဖြားတတ်သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က ဤကဲ့သို့သော လူမျိုးကို ချစ်သည်ဟု ဆိုရာ၌ ကြီးမားသော မေတ္တာတော်ကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ယာကုတ်၏ အသက်တာတွင် အပေးအယူလုပ်ကာ အမြဲတမ်းအနိုင်ယူရန် ကြိုးစားအားထုပ်လေ့ရှိသည်။ ဘုရားသခင်ကိုပင် အပေးအယူလုပ် ရန်ကြိုးစားအားထုပ်ခဲ့သည်။ ဗေသလ အရပ်တွင် ကျောက်ခဲကို ခေါင်းအုံးပြီး အိပ်စက်အနားယူနေရာ ထိုအရပ်တွင် ကောင်းကင်တမန်များ ဆင်း/တက် နေကြသည်ကို မြင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဘုရားသခင်က
ငါသည် သင်၏အဘ အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇတ်၏ဘုရားတည်းဟူသော ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ သင်အိပ် သော မြေကို သင်နှင့်သင်၏ အမျိုးအနွယ်အား ငါပေးမည်။ သင်၏အမျိုးအနွယ်သည် မြေမှုန့်ကဲ့သို့ များ ပြားလိမ့်မည်။ အရှေ့အနောက် တောင် မြောက် လေးမျက်နှာ အရပ်တုိ့သို့ နှံ့ပြားလိမ့်မည်။ သင်နှင့် သင်၏ အမျိုးအနွယ်အားဖြင့် လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံရကြလိမ့်မည်။ ငါသည် သင့်ဘက် မှာ ရှိ၏။ သင်သွားလေရာရာ၌ ငါစောင့်မမည်။ ဤပြည်သို့ တစ်ဖန် ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ကတိထားသည့် အတိုင်း မပြည့်စုံမှီ၊ သင့်ကို ငါမစွန့်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ကမ္ဘာဦး ၂၈း၁၃-၁၈)
မနက်မိုးလင်းလာသောအခါ အိပ်ရာမှ နိုးပြီး ထိုအရပ်မှ မထွက်ခွာခင် ယာကုတ်က
ဘုရားသခင်သည် ငါ့ဘက်၌ ရှိလျက် ယခုသွားရာလမ်းမှာ ငါ့ကို စောင့်မ၍ စားစရာအစာ၊ ၀တ်စရာ အ ၀တ်ကို ပေးသနားတော်မူလျှင်၎င်း၊ ငါသည်တစ်ဖန် အဘ၏ အိမ်သို့ ငြိမ်သက်စွာ ပြန်ရောက်၍ ထာဝရ ဘုရားသည် ငါ၏ဘုရား ဖြစ်တော်မူလျှင် ၄င်း မှတ်တိုင်ပြု၍ ငါထူထောင်သော ဤကျောက်သည်လည်း ဘုရားသခင်၏ ဗိမ္မာန်ဖြစ်ရမည်။(ကမ္ဘာဦး ၂၈း၂၀-၂၁)
ယာကုတ်သည် ထိုမျှလောက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ကတိတော်များ ရရှိထားသော်လည်း ဘုရားသခင်က နှုတ်ထွက်စကားတော်အတိုင်း မလုပ်မှာ စိုးပြီး အပေးအယူ လုပ်ခဲ့သေ:သည်။ ကိုယ်တော် တကယ်လုပ်ပေးရင်း ကျွန်တော်လည်း ပြန်လုပ်ပေးမယ်။ ကိုယ်တော် တကယ်လုပ်မပေးရင် ကျွန်တော်လည်း လုပ်ချင်မှ လုပ်မယ် ဆိုသည့် သဘောပင် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် သူသည် ခရီးဆက်လက် ထွက်ခွာ ခဲ့ပြီးနောက် သူ့ဦးရီး လာဗန်ထံတွင် ရောက်ရှိသည်။ ထိုနေရာတွင် အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် သူသည် သူ့ဦးရီးလည်းဖြစ်၊ ယောက္ခမလည်းဖြစ်သည် လာဗန်၏ အိမ်တွင် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် နေခဲ့ရသည်။ ထို့နေ့ရက် ကာလများသည် ယာကုတ်အတွက် ပျော်ရွှင်မှုများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် နေ့ရက်များပင် ဖြစ်သည်။ စိုက်သည့်အတိုင်း ရိတ်ရသည် ဟု ပြောရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် လာဗန်က လှည့်စားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယာကုတ်ကို အသုံးချကာ စီးပွားရေး အမြတ်ထုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး မခံနိုင်သည့် အဆုံးတွင် ယာကုတ်က လှည့်စားမှုများ၊ ကလိမ်ကကျစ်ညဏ်များကို အသုံးချကာ လာဗန်ကို ပြန်လည် လှည့်စားပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ရရှိလာသောအခါ လာဗန်ထံမှ ထွက်ပြေးတော့သည်။
အပြန်ခရီးတွင် ပြဿနာ စတင်ချေပြီ။ သူလှည့်စားခဲ့သော သူ့အကိုနှင့် ရင်ဆိုင်ရတော့မည်။ သူ့အကို ဧသော သည် ယာကုတ်ကို သတ်ချင်လောက်အောင် မုန်းတီးနေမှန်း သူကိုယ်တိုင် သိပါသည်။ သို့သော် အမိဝမ်းတွင်းမှာ ကတည်းက ပင် ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်တော် ဖြစ်သော “အကြီးသည် အငယ်၌ ကျွန်ခံရလိမ့်မည် (ဗျာဒိတ် ၂၅း၂၃)” ဆိုသော ကတိတော်ကို သိပြီး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဒီခရီးကို အစပြုခဲ့သည့်အချိန်က ဘုရား သခင် ဗေသလအရပ်တွင် မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သော စကားတော်များကိုလည်း သိပြီးဖြစ်သည်။ အကို ဧသောကို ရင်မဆိုင်ရဲသောအကြောင့် မိမိကျွန်များနှင့် မယားများကို ရှေ့မှ စေလွှတ်ကာ အကို၏ အမျက်ဒေါသကို ပြေရာပြေကြောင်း ဖြစ်စေရန် ကြိုးစားအား ထုပ်ခဲ့သည်။ ထိုဗျာဒိတ်တော်များကို သိရှိ ပြီးဖြစ်ပါလျက် အကို ဧသောကို ရင်မဆိုင်ခဲ့သည်မှာ ကတိတော်ကို မယုံကြည်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် အကိုဧသောနှင့် မတွေ့မီ ညတွင် ယာကုတ်သည် ယဗ္ဗုတ်ဆိုသော ချောင်းကလေး နံဘေးတွင် တကိုယ်တည်း ရှိနေစဉ် လူတစ်ဦးသည် သူ့ကို ၀င်ရောက်နဗန်းလုံးလေသည်။ ထိုသူသည် ကောင်းကင်တမန် ဖြစ်သည် ကို သိရှိသောအခါ အတင်းဆွဲထားလေတော့သည်။ ထိုသူက မိုးလင်းတော့မည် ငါ့ကိုလွှတ်ပါ ဟု ပြောသော အခါ “ကိုယ်တော် ကျွန်တော့်ကို ကောင်းကြီးမပေးလျှင် မသွားရ” ဟူ၍ ပြောဆိုပြီး အတင်းဆွဲထားလေတော့သည်။ ထိုကဲ့သို့ အတင်းဆွဲထားရခြင်းမှာ မနက် ဖြန်တွေ့ရမည့် အကိုဖြစ်သူနှင့် ရင်ဆိုင်ရာတွင် အောင်မြင်မှု ရနိုင်ရန် ကောင်းကြီး အတင်းတောင်းခံနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့ညတွင် ကောင်းကင်တမန်က ယာကုတ်၏ ပေါင်ရိုးကို ထိုးသဖြင့် သူသည် အဆစ်ပြုတ်ကာ ဒုက္ခိတ ဘ၀ ရောက်ရှိသွားလေတော့သည်။ ဘုရားသခင်က ထိုသို့ ဖြစ်စေခြင်းမှာ သူ့တွင် အစွမ်းအစမရှိကြောင်း သိစေချင်၍ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ယာကုတ်သည် ကိုယ်တိုင်က ဒုက္ခိတ ဖြစ်သည်။ သူပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကိုလည်း သူ့အကို ကျေနပ်စေရန် ပေးဘို့ စဉ်းစားထားသည်။ ယခုအခါ ပိုင်ဆိုင်မှု လည်းကင်းမဲ့၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒုက္ခိတ ဖြစ်နေပြီ။ ထိုအခြေအနေကို ရောက်စေခြင်းမှာ ယာကုတ်ကို မင်းဘယ် လောက် ကလိမ်ကကျစ်ညဏ်သုံးသုံး၊ မင်းဘယ်လောက် အစွမ်းအစရှိရှိ ဘာမှ အသုံးမကျပါဘူး၊ ဆိုတာကို သိစေခြင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ယာကုတ်သည် ကိုယ်ပိုင် အစွမ်းအစ မဲ့သွားလေပြီ။ သို့သော် သူခံစားလိုက်ရသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ တခုရှိသည်။ ထိုအရာမှာ ယာကုတ်၏ အမည်ကို ဣသရေလ ဟူ၍ အမည်ပြောင်းလိုက်သည်။ ဣသရေလ ဆိုသည်မှာ “ဘုရားသခင်၏ အိမ်ရှေ့စံ ကိုယ်တော်လေး” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ ပါသည်။ ဒုက္ခိတဖြစ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဆုံးရှုံးရမည့် အခြေအနေ ရောက်မှ ယာကုတ် “လှည့်ဖျားသူ” မှ “ဘုရားသခင်၏ အိမ်ရှေ့မင်းသား” ဖြစ်လာတော့သည်။ ထိုအချိန်ရောက်တော့မှာ ယာကုတ်သည် အရာရာကို နားလည်သွားချေပြီ။
ဆက်လက်ပြီ သင်ကိုယ်တိုင် အခြေအနေကိုလည်း ဆက်လက် ဆန်းစစ်လေ့လာပါ။ သင်သည် ယာကုတ်ကို အပြစ်တင်ကောင်း တင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် သင်ကိုယ်တိုင်ပင် ယာကုတ်ထက် ပိုမိုဆိုးရွားသောသူလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူတိုင်းသည် ယာကုတ်ကဲ့သို့ပင် ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စကိုသာ အားကိုးယုံကြည်ပြီး ဘုရားသခင်ကို ဘယ်သောအခါမှ ယုံကြည်အားကိုးနိုင်မှု မရှိကြပါ။ မျက်မြင်အခြေအနေကိုသာ ကြည့်ပြီး အသက်ရှင် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ သင်ကိုယ်တိုင် ယာကုတ်နှင့် ခြားနားပါသလား။
အထက်ပါ ဖြစ်စဉ်များအရ ယာကုတ်သည် အမှန်တကယ် ကောင်းသောသူ မဟုတ်ပေ။ သို့သော် အဘယ်ကြောင့် ဘုရားသခင်က ချစ်ရပါသနည်း။ ရှင်းပါသည်။ တခုတည်းသော အကြောင်းသာ ရှိပါသည်။ ထိုအရာမှာ ကျေးဇူးတော်သာ လျှင် ဖြစ်ပေသည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်က မကောင်းသောသူများ အားလုံးကို ဘုရားသခင်၏ အချစ်တော် ဖြစ်စေသည်။”ကျေးဇူးပြုလိုသောသူကို ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏” (ရောမ ၉း၁၈)။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ လက်ခံမှသာ ထိုကျေးဇူးတော်ကို ခံစားနိုင်သည်။ လက်မခံပါက ထိုကျေးဇူးတော်ကို ခံစားနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိချေ။
ဘုရားသခင်မုန်းသော ဧသော အကြောင်း ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: အလိုေတာ္.	Leaveacomment
ဘုရားသခင်က သင့်ကို ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် သင်ဘာကိုရွေးမလဲဆိုတာ ဘုရားသခင်ဟာ သိပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ ဘယ်အရာ ဖြစ်ပါသလဲဆိုတာ ဘုရားသခင်ကို မေးသင့်ပါတယ်။ပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့ သင့်သဘောဆန္ဒနဲ့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ မရှိသင့်ပါဘူး။ ကျမ်းစာရဲ့ သွန်သင်ချက်အရ သင့်ရဲ့ အလိုဆန္ဒ၊ စိတ်အကြံအစည်၊ နဲ့ ဘ၀တခုလုံးကို အရှုံးပေးထားဘို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ညီအကိုတို့ အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊ သန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာ၊ ဘုရားသခင်နှစ်သက်ဘွယ်သော လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံသော ယဇ်ကို သင်တို့သည် ပူဇော်၍ မိမိကိုယ်ခန္ဓာကို ဘုရားသခင်အား ဆပ်ကပ်ခြင်းတည်းဟူသော သင်တို့ပြုအပ်သော ၀တ်ကို ပြုမည်အကြောင်း ဘုရားသခင်၏ ဂရုဏာ တော်ကို ထောက်ထား၍ သင်တို့ကို ငါတိုက်တွန်း နိုးဆော် ပေ၏။ သင်တို့သည် လောကီ ပုံသဏ္ဍာန်ကို မဆောင်ကြနှင့်။ ကောင်းမြတ်သောအရာ နှစ်သက်ဘွယ်သောအရာ စုံလင်သော အရာ တည်းဟူသော ဘုရားသခင် အလိုတော် ရှိသော အရာသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သင်နိုင် မည့်အကြောင်း စိတ်နှလုံးကို အသင့်ပြင်ဆင်၍ ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ကြလော့။ (ရောမ ၁၂း၁-၂)
သင့်ကို ဦးဆောင်ရန် (သို့) လမ်းပြမှုရရှိရန် ဘုရားသခင်ထံတွင် တောင်ခံပါ။ အရှင်မြတ်၏ နှုတ်က ပတ် သမ္မာတရားများကို ယုံကြည်နိုင်ရန် စိတ်နှလုံးကို ဖွင့်ကာ ဘုရားသခင်ထံတွင် တောင်းခံပါ။ ထိုအရာများကို လိုက်လျှောက်နိုင်ရန်၊ နားလည်နိုင်ရန်၊ ကူညီမှုရနိုင်ရန် တောင်းခံပါ။ မည်သည့် အရာပင်ဖြစ်စေ အလိုတော်ထဲမှာ အသက်ရှင်ချင်သော စိတ်ဓါတ်ပြင်ပြစွာ ရှိပါစေ။ ထို့နောက်တွင် ထိုအလိုတော်ကို သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။ သင်သိခွင့်ရပါလိမ့်မည်။ သင်သည် ဘုရားသခင် ၌ရှိသော အခြေအနေ အဆင့်အတန်းကို ဘုရားသခင်က ပြချင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်၏သား၍ ဘုရားသခင်က ရွေးချယ်သောသူဖြစ်လျှင် ဘုရားသခင်က မည်သည့်အရာ များကို ရွေးချယ်ပေးတွေ့မည်နည်း။ အရှင်မြတ်သည် အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုသာ သင့်အ တွက် ပေးတွေ့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီအမှန်တရားက မှေးမှိန်သွားဘို့ မရှိပါဘူး
အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံတွေကို ပေးနေပါတယ်။